Samee jadwalka muraayadaha iyo masaafada udhaxeeya UTM Iskuduwaha
Maarso, 2008 AutoCAD-AutoDesk, Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Mashirkani wuxuu jawaab u yahay Diego, oo ka yimid Paraguay oo naga dhigaya su'aasha xigta:
ii farxad inaan salaamo ... waqti ka hor by search a in uu si qalad ah u iman raba in aad website oo aan helay iyadoo aad u xiiso badan, oo labaduba madadaalinta orday sida jidka si ay isgaadhsiin aad ciencia.Yo jeclaan lahayd inaad weydiiso haddii aad ogtahay script qaar ka mid ah, ama qaab dhismeedka qaar ka mid ah si aad u caawiso inaan sameeyo waxyaabahan soo socda: Waxaan khadadka ku sawiray CAD qaabeeyaha oo leh dhibcooyinka dhibcaha ee si fiican loo cayimay, iyo iskuduwayaashooda oo dhan UTM. Waxaan si fiican u dhoofin karaan si ay txt inay akhriyaan su'aasha excel.Mi: og 1 UTM xogta ... dhibcood N, waxaa suurtagal ah si ay u helaan xogta xilli ciyaareed, tilmaamaha iyo masaafo sida in ka macluumaadka aan bixiyo? dhibic 1 leeyahay X ... Y ..., oo ogaa in dhibic 2 leeyahay X ... Y ..., WAA MA BUUXI KARAA DISTANCE MID KA MID AH SIDA LAGU QAADAY KOOXAHA? si aad si toos ah u sameyso foomka macaamiisha? mahadsanid ... si fiican uga fiirsashada Paraguay!
Waa hagaag, waxa uu doonayo Diego UTM isuduwid dhalin tilmaamaha sanduuqa oo masaafo ... iyo sida dhammeeyey Easter, markii aan cunay cake kalluunka, shiiley ee malab iyo ka qaaday sawiro wanaagsan oo katiifadaha balka ... halkan jawaabta ay. First waxaan aqoonsannahay in sida ugu wanaagsan ee ay tan u sameeyaan waa la qalab sax ah (waxay la jiri karaa macro Vba ee MicrostationIyadoo Softdesk ama AutoCAD Civil 3D) laakiin ujeeddooyin waxbarasho, iyo fahamka in nolosha aad leedahay si ay u isticmaalaan waxa aad leedahay, aan aragno sida loo sameeyo la Excel.
1 Abuuri dhibcooyinka
Diego wuxuu inoo sheegayaa inuu haysto qaab u diro feylka faylka faylka ah, si uu u furo Excel, sidaas darteed kiiskeyga ayaan ku samayn doonaa Microstation. Sababtoo ah waxaan rabaa in aan xogta u diro Excel, waxaan ku dhejin doonaa dhibco kasta oo xadhig ah. Si aad u noqoto mid muuqata, waxaan bedelay dhumucda xariiqda, waana muhiim inaad fahamto in Microstation ay u diri doonto faylka xajmiga si loo abuuro, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la abuuro si caadi ah.
Si aad u soo dirto Excel, adeegso "qalabyada dhoofinta", samee "xayndaab" kaas oo daboolaya qodobbada oo loo habeeyey xogta:
Waxaan ku qornaa magaca feylka imtixaanka ah test444.txt
Waxaan qeexay in amarka i xiisaha leh ay tahay XYZ
Habka cutubyada "cutubyada sare" ee mitir
Waxaan tilmaamayaa inaan kaliya doonayo laba decimals
Kadibna kala soocida jajabinta iyo lambarka 1
Adigoo gujinaya badhanka "deedka" iyo gujinta shaashadda, nidaamka wuxuu abuuray faylka shaashadda wuxuuna abuuray nambar kasta oo ka mid ah dhibcaha, laga bilaabo 1 ilaa 36.
2. Miiska miiska ka fur
Si aad u furto feylkan Excel, waxa uu noqonayaa "fayl / furan" oo dooro nooca faylasha "faylka qoraalka, .prn .csv .txt" Kadibna guddiga soo muuqda, waxaa la doortaa in qoraalka uu kala tagayo malawadka. Ugu dambeyntii feylka waxaa la furay sadexda tiir, ugu horeyn waxaa ku jira lambarrada dhibcaha, labaadna waa isku duubnaanta X iyo saddexda mid ee isdhexgalka.
3. Xisaabi Masaafada
Aan ku laabano shuruucda aasaasiga ah ee trigonometry marka hore. Xasuuso inaan raadineyno masaafada iyo xagal.
kala duwan ah isuduwaha = Y (waa lagaa saarayaa by kalagoynta x2 - x1) ee Mb = column kala duwan isuduwaha X (waa lagaa saarayaa by kalagoynta y2 - y1) ee LC = column shakaal waa xididka square ah square b more ilaa laba jibbaarane, oo ku yaala P iyo tan waxay noqon doontaa qiimaha fogaanta.
4. Xisaabinta koorsada
Hadda, koorsada waxaan u baahanahay in aan samayno xisaabin dhowr ah; laakiin dhammaantood waxay ka baxaan xagasha u dhaxeysa saldhigga iyo mid isku xigta. Xisaabinta xagasha. Xusuuso in Kosine xagasha waxay u dhigantaa kala qaybinta b u dhaxaysa c, ama xalka x ee u dhexeeya masaafada oo loo xisaabiyo hypotenuse.
Sidaa awgeed waxaa keliya lagu sameeyaa Excel iyadoo loo qaybinayo dariiqa L u dhexeeya jaantuska P. Sidoo kale waxaan sameynaa xisaabinta sinaan, oo qeybin doona Delta Y u dhexeeya hypotenuse (M inta u dhaxaysa P). Hadda for xisaabi xagasha, waxaan ku dabaqi karnaa koodhinka khafiifka ah ee tiirka ah ee ku jira iyo sida Excel isticmaalayso radians, ku dhufo qiimaha 180 oo u kala qaybso PI; qaacidduna waxay u egtahay sidan: = ACOS (column R) * 180 / PI ().
Hadda si loo xisaabiyo Bar-tilmaameedka bariga / galbeedka Waxaan u xilsaarinnaa xaalad: in haddii ay cosinadu tahay mid togan, qor E, haddii cosinku yahay mid taban, qor W. Qaaciddada ayaa u eg sidan: = HAA (R2 <0, »W», »E»)… waxay ku taal sadarka T Si loo xisaabiyo Jihaynta Waqooyi / Koonfur, waxaan ku meelaynaa xaalad la mid ah tii hore, laakiin naaska; taasi waa, haddii seygu yahay mid togan, qor N, haddii ay taban tahay, qor S oo qaaciddada ayaa sidan oo kale noqonaysa: = HAA (R2 <0, »W», »E»)… waxay ku taal sadarka U
Hadda xasuusnow in xagasha hore loo xisaabiyo waa ka soo horjeedka, bariiska iyo waxa aan ubaahanahay waa qadar dhanka waqooyi ama koofur. Sidaas haddii ay dhacdo of NW iyo SW rubuc heshiis qaadan 90 degrees, sidaas waxa aannu ku samayn waa abuuro shardi ah in haddii cosine uu yahay mid diidmo ah, waxaad kala gooyaan 90 iyo NE ah rubuc oo aynu nahay hawlan 90 Kala jar jaray xagal ... waa ee tiirarka V
Qodobka V ayaa muujinaya xagasha, laakiin qaabka tobanle. Si aad ugu beddesho jajab tobanlaha, daqiiqado iyo daqiiqado waxa aan sameyno waxay ku-soo-geli doonaan jajab tobanlaha, maadaama ay ku jirto W. xisaabi daqiiqadaha, waxaan ka jaraa heerarka dhamaystiran oo laga reebo darajooyinka la kala jaray waxayna ku dhufanayaan 60. Kadibna waxaan ku dhejinaynaa jajab tobanle ah sida ay u muuqato jaantuska Y. Markay dhacdo ilbiriqsiyada, iskutallaabi daqiiqadaha yar ee daqiiqadaha la soo gaabiyay, oo lagu dhufto 60. Ugu dambeyntii ilbiriqsi waxaa keenin laba jajab tobanle ... ishaadu hadday wadataa UTM la isticmaali lahaa wax ka badan laba meelaha jajab tobanle, qiimaha tobanle ee ugu dambaysta ma noqon doonto mid aad sax u, sidaas darteed waa in la fiican ee ku hartay lahaa in jajab tobanle ah.
5. Abuuritaanka jadwalka jihooyinka iyo masaafada
Tan darteed waxaan u adeegsaday qaaciddada iskudhafsan, sidaa darteed waxaan ku daryaa unugga leh lambarka 1, ka dibna meel bannaan oo hyphen ah, ka dibna qolka leh lambarka 2; Sidan ayaan uga tagey qaab dhismeedka saldhigyada «1 - 2»
Meelaha fog. Kuwani waxay ka yimaadaan tiirarka "hypotenuse".
Koorsada. Tani waxay u baahan tahay oo keliya in la keeno qiimaha xisaabeed ee xisbiyada horay loo xisaabiyey, iyo in unugta lagu daro calaamada darajada, daqiiqo ama labaad ayaa lagu abuuray sifooyinka unugyada sida ku cad muuqaalka. Waxaa intaa dheer waxaan ku daray qayb ka mid ah indha indheynta, sababtoo ah sahammo badan oo loo baahan yahay ayaa loo baahan yahay. Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa faylka qaabka Dwg, qaab ahaan Dgn, faylka Excel iyo faylka txt.
Sidaas darteed Halkan waa faylka ee Excel kaas oo aad ka abuuri karto koorsada rikoodhada iyo masaafada u dhaxaysa isku-duwaha UTM ee xiga. Si aad ugu darto qodobo, waxaad daabacan kartaan iskuxirta oo aad gashaa, waxay ufiican tahay sida aad u damaanad qaadatid qaababka, oo raadinaya inaad ixtiraamto safka hore iyo kan ugu dambeeya. Waa inaad sidoo kale nuqul ka bixisaa macluumaadka barta kowaad ee dhammaadka koowaad, sidaa darteed saldhiga ugu dambeeya si fiican ayaa loo xisaabiyaa.
Halkan waxaad ka soo dejisan kartaa template si aad u abuurto sanduuq ka mid ah rikoodhada iyo masaafada udhaxeeya UTM.
Waxay u baahan tahay naqshad calaamadeyn ah oo ku saabsan soo dejinta, oo aad ku qaban karto PayPal ama credit card.
Post Previous«Previous Abuuraan farta "AutoCAD" kuna soo dir Google Earth
Post Next Xisaabinta dhismaha, oo ay ku jiraan qorshooyinkaNext »
41 Jawaab in "Abaabulaan koorso iyo masaafo ka socota UTM isku duwayaasha"
casriga jean isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira qalab ah oo lagu magacaabo Calculo_Topográfico.exe, aad automates habka of diinta UTM isuduwaha isbiriidhshiit ah, oo ay ku jiraan xaglo, saa'idka iyo fogaanta, iyo sidoo kale qalab kale oo muhiima sida heli qalad tahay in lagu sahanka, sidoo kale bari ama xagal by fog, yaraynaysaa geesoolayaasha ah aagga raadinayo bedelayaan hal dhinac ama xagal, fiican ee kala gogo'aan, iyo khusuusan adiga abuuraan sawir ee AutoCAD, oggolaanayo in aad nuqul ka iyo Jinka (ama) Pilot (s) of geesoolayaashu la inaad shaqeysid; Waxay sidoo kale soo dhoofisaa xogta laga helay qaababyada saldhigyada guud, si ay u gudbiyaan (ama soo dejiyaan) macluumaadka.
Danger isagu wuxuu leeyahay:
Su'aal: Sababtoo ah deltasku waxay ka xisaabinayaan hoosta oo maaha habka kale ee ku wareegsan?
Roberto G. isagu wuxuu leeyahay:
Shabakad aad u fiican, waxaan si toos ah u abuuray Microstation taasoo sameeyneysa isla aniga iyo waxaan u dhoofineynaa faylka txt.
Runtii aad ayaan ugu qanacsanahay isla waqtigana aad ayaan uga xumahay inaanan awoodin inaan soo dejiyo arjiga, maadaama aan ka dhigi karin kaalinta astaamaha, sababtoo ah iminka ma soo saarayo? ee xirfaddayda sida sahan iyo si daacadnimo ah ayaan daneynayaa macluumaadkaas si aan u ballaariyo loona xoojiyo xirfaddayda, haddii aad iigu roonaan kartid inaad ii soo dirto waan kuu mahadcelinayaa
Ka hubi boostada, spam.
Xidhiidhka safarka ayaa halkaas ka dhici kara.
Alberto Velázquez isagu wuxuu leeyahay:
Waa fiican tahay, waa wax aad u faa'iido leh !! laakiin waxaan kaliya sameeyey waxtarka oo aanan soo dejinin template ..
Josue Olvera isagu wuxuu leeyahay:
Salaan galab wanaagsan miyaad yeelan doontaa maqaal ama tusaalooyin xisaabinta cabirka cabirka? taasi waa dalabka iyo muhiimadda, salaan ka timid Mexico
Leopoldo isagu wuxuu leeyahay:
Waa fiican tahay, tilmaantan waxa aan awoodey inaan abuuro warqad sare oo xisaabinaysa tilmaamaha, mahadnaqa la wadaagaya macluumaadkan qiimaha leh.
Salaan ka timid Nicaragua
Juan Reyes OPorta isagu wuxuu leeyahay:
Hada, sidee tahay? Waxaan sidoo kale rajeyneynaa, waxaan doonayaa in aan arko haddii aan caawin kara sidii aad u fahmi oh masaafo u dhaxaysa laba dhibcood oo koorsooyinka ay la wadataa oh halkii la latitudes iyo longitudes dhaansado maxaa yeelay, waan samayn karaa xy coordendas UTM leh in aan wax dhibaato ah ma laakiin anigu ma aan samayn karo Noocaan kale ee isuduwayaasha waxay muujiyaan khariidadaha Google Earth.
salaan. Waxaan rajeynayaa jawaabtaada haddii ay suurtagal tahay ..
aagga garbaha badan adigoo isticmaalaya iskudhafka geesaha: http://play.kendincos.com/155382/Wvznrfjptptvzvzrv-area-de-un-poligono-usando-las-coordenadas-de-sus-verti.html
Gilberto H. Tirado isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibbada, akhrinta su'aalahaaga ku saabsan xisaabinta topographic, jiilka 'miisaska' isku-duwaha iyo calaamadeynta jihooyinka iyo masaafada Autocad, Waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato aaladda CIVILCAD, oo laga sameeyay Mexico, cutubkaan wuxuu ka dhigayaa autocad aalad xisaabinta topographic, astaamaha , qaybaha, contours, iwm, iwm.
Iyada oo la eegayo su'aalahaaga isku-duwaha UTM-ka gurigaaga, dhammaan barnaamijyada nidaamka GPS (GNSS xallinta ballan-qaadyada, xallinta Ashtech for Promark 2, Spectra precision Survey Office for GPS Epoch 10 iyo 50, iwm.) Waxay leeyihiin habab isbadal oo u dhexeeya nidaamyada isku-duwayaasha, waxa kaliya ee ay u baahan yihiin waa ugu yaraan hal ama in ka badan isku-duwaha UTM iyo isku-duwaha "guri" (taasi waa, isku-duwayaasha ay rabaan inay adeegsadaan isugeynta xarunta) barnaamijyadaana waxay xisaabin doonaan cabirrada cabbirka iyo macluumaadka lagama maarmaanka ah waxay u baahan yihiin, kaliya akhri tilmaamaha ku habboon ee qalabkooda oo ay si wanaagsan u qorsheeyaan aruurinta xogta. Salaan ka timid Mexico City. E-maylkaygu waa gilberto1@sitg.com.mx.
Waa lagama maarmaan in la sameeyo hagaajinta miiska, laakiin si fiican ayey u fiicneyd. Haddii aad noo soo dirto tusaale waxaan isku dayi karnaa.
MARYFER isagu wuxuu leeyahay:
Tabaruc heer sare ah. Miiskayga mar hore ayaan diyaar u ahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad iga caawin kartaan helitaanka xagal-tilmaameedka xogta laga helo isla isla shaxdan. Thanks !!
JS isagu wuxuu leeyahay:
Macallin, iyo habka dib ugu noqoshada?
Laga soo bilaabo tilmaamaha joornaalada juqraafi?
Waad saxan tahay, waxay dhacdaa in xadka baaxadda leh ee geofumadas.com, oo ah meesha faylalka iyo sawirrada ka soo baxa balooggan lagu marti geliyo, ayaa la dhaafay. Waa inaan kor u qaadaa ballaca, isku day mar dambe.
sida ku saabsan, isku day in aad soo rogto faylka excel laakiin ii cade in aan la heli karin, waan ka caawin kara this.
Waa inaad si gaar ah u noqotaa mid ka duwan tan aad ula jeeddo isku-duwaha shaxda.
Ma tiri juqraafi iyo sidoo kale darajooyin, daqiiqado, ilbiriqsi? Sababta aad u isticmaali kartid qalabkan.
Haddii aadan tixraacin, fiiri inaad na siisid tusaaleyaal kaa caawiya.
Waxaan leenahay Isku-dubbaridaha UTM sida aan u sameeyo si aan u yareeyo wadashaqeyn ballaaran.
The ugu wax ku ool ah waa in aad xisaabiso degaanka ee AutoCAD, kaas oo isha ku heysa inay xisaabin kaliya aagga laakiin xaqiijiyo xiritaanka, laga yaabee in uu jiro template qaar ka mid ah in ma waxa aad rabto laakiin ma oga.
Mabel isagu wuxuu leeyahay:
Bogga waa mid aad u fiican. Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado sida loo xisaabiyo (in Excel) aagga ka soo baxay garoobka oo laga soo saaro kaararka dhinacyada iyo jiingadaha laga helay berrinka. Anigu waxaan ahay xirfadle, waxaanan isticmaalaa barnaamijka Autocad, isaga oo isku dhejinaya miisaska Excel.
Waxaan si qoto dheer uga mahadcelinayaa dantaada inaad ka jawaabto su'aalahayga.
Asxaabta ugu fiican ee Asuncion ee Paraguay
Waxaan u maleynayaa inaad jahwareersanayso howsha, hadaadan laheyn isku duwaha utm, uma baahnid inaad raadiso iyaga. Waa inaad tarjunto waxa sawirka sahankaagu leeyahay, waxaa jira barta ugu horeysa, hadii aysan dhihin isuduwid meel kasta dhig, ka dib fiiri haddii ay jirto koorso iyo masaafad aad ku tageysid barta xigta.
Faylkaasi maahan, taasi waa in la xisaabiyo sanduuqa kuxiga ee ku saleysan dhibcooyinka isku-xireyaasha
Maestro Alvarez, faylkan ayaa xisaabinaysa UTM isku-duwidda qaybta kala-goyska ee la socota gaadiidka iyo heerkuna waa cajiib laakiin ma fahmi karo
Eeg saaxiib saaxiib ka Peru ii soo direy template ah su'aal laakin ma fahmi karo in UTM la geeyay bilowga u dhexeeya PI kasta, sida faylka faylka
Hi Jcp, Waan fahamsanahay inaad leedahay xariiq dhexe, oo leh saldhigyo iyo xarun kasta oo leh dhinac bidix iyo bidix. Waxaan u malaynayaa in waxa ugu habboon ay tahay inaadan isku deyin inaad hesho isku duwaha utm, laakiin samee goobo goobood xarunta, adoo dhigaya barta isgoyska goobarta iyo xariiqda.
Tani waxay kaa dhigeysaa wax aad la mid tahay layligan
Kadib markaad ku darto heerarka sare waxay u habeyneysaa qaab dhibcood oo aad ku soo gashid tan waxaad ku siin kartaa kor u qaadista.
Gacaliye Mr. Alvarez ahay isticmaalaya sokeeye 3d 2009, goobaha laga soo galo UTM qaab .csv laakiin hadda waxaan u leedahay si loogu badalo qaybaha iskutallaabta dhisay gaadiidka iyo heerka UTM ee Excel, Anigu waxaan haystaa dhidibka la qeexay iyo barta aan bilaabo 0 000 isaga + kor GPS geotagging ... si ay u xisaabi kartaa dhibcood sida PI aan usheeda dhexe iyo qaybo in UTM
Waxaan ka socdaa Honduras
lolos isagu wuxuu leeyahay:
Xaqiiqdii, isku-duwayaasha aan horayba u haystay, laakiin waxaan rabaa in aan yareeyo duullimaadka dusha sare si aan uga shaqeeyo beerta
Fiiri, ma aanan isticmaalin Ballan-qaadka, laakiin waxaan arkaa inay u egtahay sida Mashiinka Mobile-ka ee laga soo bilaabo Thales.
Taasna waan samaynay:
1 Riix badhanka «MENU»
2 Xulo «Qeybaha Khariidada»
3 Xulo «Nidaamka Isku-duwaha» oo dooro UTM
4 Waxaad doorataa «Datum» oo halkan waxaad ku muujineysaa WGS84
Waxay yihiin kuwo yaryar, waxay calaamad u yihiin 2, magaalada aagga Mexico 14, waan u mahadcelin doonaa wixii macluumaad ah ee aad bixin karto.
... Tusaale ahaan, tusaale ...
Waa maxay nooca gps, samaynta iyo tusaalooyinka ay isticmaalaan?
Waa maxay wadanka iyo meesha aad ka tirsan tahay?
Alvarez Gacaliye, kor Salaan oo dhan ah, waxaan ogaaday in aqoonta aad muuqaalka guud ee dhulka iyo software waxaa hormartay, waxaan laga yaabaa inay awoodaan si ay u caawiyaan, shirkada aan u shaqeeyo, maareeyaan GPS, iyo Waxaan doonayaa in aan ogaado sida aan ula qabsadaan wadataa UTM of wadataa qaab dhismeedka ku O PLANAS, ee maareynta maareynta, waxaan raadiyey macluumaad badan oo waan u mahadcelinayaa jawaabtaada.
Bawlos, xaqaaga qaddarinta, waxaan horeyba u dhignay sixitaanka qorista, waa column L u dhexeeya jaantuska P
Dhibaatada kale ee aad kor u qaadday, waxaan u maleynayaa inaad ku guul daraysatay inaad dhamaystirto faallada si aad u falanqeyn karto
PABLO SAKAMOTO isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raacay tilmaamaha tallaabo tallaabo tallaabo ah. Fikrad ahaan waan fahmay, laakiin ficil ahaantii ma aanan awoodin inaan gaaro natiijooyin fiican.
Mae waxay u egtahay sidii aan wax u qaldamay. sidoo kale qaabeynta qaybaha Autocad len qaybta xaglaha iyo jihada aan ahay mid aad u cad.
Waxaan rabaa inaan soo jeediyo inaad dib u eegto qeybta xaglaha Waxaan u maleynayaa inuu jiro khalad, halkaas oo ay leedahay "u qeybi column N by column P" Waxaan u maleynayaa inay tahay column L by column P.
Qalad kale oo qoraal ah ayaa sidoo kale ka muuqata xisaabinta jihada waqooyiga / koonfureed, qaaciddu waxay sheegaysaa: waxay noqon laheyd: = SI (R2
haddii aad ka dhigan tahay sawir lagu cabbiray aag aaga meesha ay isbeddesho ... laguma dhejin doono.
Haddii aad u jeeddo ku haysid isku-duwayaashaas aag kale oo utm, majiro wax isbedel ah maxaa yeelay waxaa lagaaga baahan yahay inaad ka hadasho isla latitude, markaa isku-duwayaashu waxay u dhigmaan
Waan jeclahay qaab-dhismeedkan si fiican, waxaan haystaa su'aal
Sidee loo adeegsadaa marka uu jiro isbeddel ku yimaada mashiinka?
Waxaan horeyba ugu direy boostada
mmm, i soo dir qoraalka aad ku sheegeysid boostada aad leedahay, si aad dib ugu eegto.
Waan arki doonaa waxa jira
qaliinka !!! hadda waxaad tagtaa 100%, waxaan isticmaalay oo waa run! mahadsanid aad u badan, waxaan ahaa faa'iido leh.
Su’aal ayaa ku saabsan tan, maadaama aan ku jirno hawlo iswada. Adigoo adeegsanaya AutoCAD, adoo leh raadad juqraafi ahaan loo yaqaan 'polygon georeferenced', oo leh aaladaha loo yaqaan 'UTM vertices', waxaan u baahanahay waa calaamadeeyaha qaybaha, sidaa darteed markii aan taabto waxaan siin doonaa calaamaddooda u dhiganta, "tusaale ahaan" 176.35
diyaar, Waxaan horey u soo saaray nooca '2' ee faylka ugu sareeya. Sababta waxay ahayd in gudaha rubucayaasha NE iyo SE xagasha ilaa 90 ay ahayd in laga gooyo.
Sii isku day inaad ogaatid.
Waa inaad caddeysaa, in jajab tobanle ah loo isticmaalo isku-duwaha UTM, waxay bedeli doontaa jajab tobanlaha.
mmm, waa sax, waxaan u maleynayaa inaan ogahay sida loo xaliyo
Waan hubin doonaa markaan dib ugu noqdo gurigeyga.
Macallin qaddarin leh, ugu horreyntii waad ku mahadsantihiin jawaabtaada degdegga ah, waxaan runtii ku imid waqtigii!
Waxaan faallo ka bixiyay inay wax badan i caawisay, waan tijaabinayay, in kasta oo aan jeclaan lahaa inaan muujiyo shaki / talo / walaac: Waxaan xisaabiyaa masaafada si aad u wanaagsan, hadda xagalku wuxuu i siiyaa dhammaystir, tusaale ahaan halkii laga ahaan lahaa 88d13'13 », waxay i siisaa 1d21'47 »!!! Waxay ahayd inay ahaato isku hagaajin yar oo waanu qabanay! Mar labaad waad ku mahadsan tahay caawimadaada!